Soo dejisan WinSCP 5.13.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WinSCP
Faallo ku saabsan WinSCP
WinSCP Xirfadaha la xiriira
Qalab Functional isgaarsiinta codka. Software ayaa si toos ah u kordhiyaa nimadu codka iyo buuq ka saaraan, bixinta tayada fiican ee isgaarsiinta.
Tani waa software si loo beddelo xogta qalabyada sida GPS aqbalayaasha iyo adeegga kontoroolayaasha ee ku xiran kombiyuutarka iyada oo loo marayo dekedaha ugu caansan.
Auslogics File Recovery 8.0.21
Software inuu ka soo kabsado ka files si qalad ah la tirtiro ama laga badiyay. Software waxay leedahay nidaam dabacsan oo raadinaya in xooga badbaadiyay markii on raadinta macluumaadka lagama maarmaanka ah.
FreeMind 1.0.1 iyo 1.1 beta
Agabka in ay la shaqeeyaan maabka maskaxdaada. Software ayaa awood u si ay u hirgeliyaan fikradaha iyo qorshayaasha qaab qoraal ama foomka nidaamada.
Tool in ay la shaqeeyaan Darawaliinta qalabka gudaha iyo dibadda ee kombiyuutarka. Software ayaa si toos ah lafaguraa habka darawalka ugu diyaar u ah in dayactir kooban.
Software ayaa doonaya in uu codkiisa iyo isgaarsiinta iyadoo dadka kale ee qoraalka. Software ayaa awood u dhigay si sir ah u helaan lagu sheekeysto iyo reserved sanduuqa hadal baahida user ah.
Tababaraha ayaa aaladaha ka Garmin. Sidoo kale software downloads updates ee khariidado iyo waxyaalaha kale ee aaladaha.
Any Video Converter 6.2.9 ...
XnView 2.47 Standard...